Garoonka kubadda cagta ee Koonis oo haatan loogu magac daray Marxuum Eng. Yariisow… – Hagaag.com
Garoonka kubadda cagta ee Koonis oo haatan loogu magac daray Marxuum Eng. Yariisow…
Posted on 9 Agoosto 2019 by Admin in National // 0 Comments
Kullan loogu duceynayay marxuum Eng Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow Guddoomiyihii Gobolka Banaadir ahaana Duqii Muqdisho ayaa maanta ka dhacday garoonka kubadda Cagta Koonis ee magaalada Muqdisho, kaasi oo haatan loogu magac daray Marxuum Eng Yariisow.
Munaasabaddan ducada ah ayaa waxaa ka qaybgalay madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo , guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, Raiisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre, xubnaha golayaasha kala duwan ee dowladda, kumanaan dadweyne ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolkan Banaadir iyo mas’uuliyiin kale.
Mas’uuliyiintii ka hadashey munaasabadaasi ducada ayaa qirtay in Marxuum Yariisow uu ahaa shaqsi ku weynayd wadaniyada, dal iyo dowlad jacaylka iyo in uu horumar gaarsiiyo bulshadiisa.
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay munaasabadaasi ducada ayaa ku dhawaaqay in Garoonkaasi Koonis hadda kadib loogu magacdaray Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng Yariisow).
Mas’uuliyiintan iyo shacabki tagay goobtaas ayaa Eebe uga baryay in uu janadii Fardowsa uu ka waraabiyo, waxana madaxda dowladdu ay balanqaadeen in ay ka warqabi doonaan qoyskii uu ka tagay marxuum Eng Yariisow.